नेपाली वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरले पूरा गरे ग्यालिलियोको अधुरो सपना | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार नेपाली वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरले पूरा गरे ग्यालिलियोको अधुरो सपना
नेपाली वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरले पूरा गरे ग्यालिलियोको अधुरो सपना
२०७३, १८ चैत्र शुक्रबार ०८:१४
सोह्रौँ शताब्दीका महान् वैज्ञानिक ग्यालिलियोले निरन्तरता दिएको एउटा वैज्ञानिक योगदानले पूर्णता पाएको छ । भौतिक विज्ञानको जग मानिने विस्थापनको सूत्र निर्माणको उक्त प्रयासले ४ सय ३२ वर्षपछि पूर्णता प्राप्त गरेको हो । भौतिक विज्ञानमा विगत लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेर रहेको उक्त समस्याले नेपालमा गरिएको एक अनुसन्धानपछि पूर्णता प्राप्त गरेको हो ।
म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका २, ज्यामरुककोटका भविन्द्र कुँवर सुल्झिन नसकेर रहेको उक्त भौतिक शास्त्रीय समस्याको वास्तविक कारण र आखिरी समाधान पहिल्याउन सफल भएका हुन् । कुँवरले यस विषयमा केही वर्षदेखि खोज निरन्तर रुपमा गरिरहेका थिए । उनले केही वर्षदेखि यस विषयलाई पुस्तक, प्रवचन र अनुसन्धानात्मक लेखहरुमा उल्लेख गर्दै आए पनि परीक्षणले पूर्णता भने केही महिनाअघिमात्र प्राप्त गरेको हो ।
‘सुव्रत’का ५ वटा नयाँ समीकरणहरु पत्ता लागे
“सन् १५६४ मा इटालीमा जन्मिएका महान् वैज्ञानिक ग्यालिलियोले २० वर्षको कलिलो उमेरमा भौतिक शास्त्रका क्षेत्रमा एउटा परीक्षणप्रयास थालेका थिए । त्यसपछिका न्युटन, एलम्बर्ट, इउलर, ह्यामिल्टन, आइन्सटाइन जस्ता वैज्ञानिकहरुले आफ्नो जीवनको धेरैजसो भाग त्यही प्रयासको वरिपरि बिताउँदा पनि समस्या सल्टिन सकेको थिएन ।” बैज्ञानिक कुवरले भने “जसका कारण लामो समयदेखि विश्वभरिका विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयमा रहेका प्राध्यापक तथा शिक्षकहरुले कामचलाउ सूत्रका भरमा अध्ययनअध्यापन गराउँदै आएका थिए ।”
विभिन्न शिक्षण संस्था र अनुसन्धानकेन्द्रहरुमा प्रदर्शन गरिएका परीक्षण र प्रवचनका शृङ्खलाहरुपछि कुँवरले सन् २०१६ को डिसेम्बरमा उक्त समस्याको समाधानसँग सम्बन्धित अनुसन्धानपत्र प्रकाशित गरेका थिए । ‘सुवातदेखि सुव्रतसम्म’ र ‘सुव्रतका केही प्रभावहरु’ शीर्षकका ती दुई अनुसन्धानपत्रहरु भौतिक विज्ञानका लागि चाबी सिद्ध हुने खोजकर्ता कुँवरले बताए । समस्यासँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक, गणितीय र प्रायोगिक प्रमाणहरु पनि अनुसन्धानपत्रहरुमा संलग्न गरिएको छ ।
“विश्वमा हाम्राभन्दा धेरै सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाहरु छन् । लगानीको अभाव पनि छैन । तर आजसम्म यति गम्भिर समस्याको समाधान पहिल्याउन किन ध्यान दिइएन ? म आश्चर्यमा छु” – कुँवरले आश्चर्य प्रकट गरे । “अनुसन्धान पत्र र सम्बन्धित समाधानहरु पढेपछि यस विषयले हामीलाई मात्र होइन संसारका सबै भौतिक शास्त्रीहरुलाई आश्चर्यमा पार्नेछ” – कुँवरले भने ।
भौतिक शास्त्रमा कोठाभित्र गरिएका बैठक र छलफलबाट अमूक परिणाम निस्क्यो भनेर जानकारी गराउने प्रवृत्तिभन्दा आफू निकै टाढा रहेको बताउँदै कुँवरले भने – “भौतिक शास्त्रीय परिणामहरु निस्केपछि भएको के थियो भन्नेबारे सबैलाई खुलेर जानकारी गराउन सक्नुपर्छ र नतिजाहरु परीक्षणबाट स्पष्ट रुपले देखाउन पनि सक्नुपर्छ ।”
भौतिक शास्त्रीय खोज तथा अनुसन्धानहरु परीक्षण गर्दा सधैँ उही परिणाम आउने र प्रयोगशाला र प्रदर्शनमा खुलेर देखाउन सकिने खालका हुनुपर्ने धारणा कुँवरको छ । उनले अनुसन्धानपत्रहरु सबैले अधययन गर्न पाउने गरी प्रकाशित गरेका छन् । यस खाले अनुसन्धानपत्रहरु अध्ययन गर्न अन्य देशमा भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
ग्यालिलियोको योगदान के थियो ?
खगोलशास्त्री तथा वैज्ञानिक ग्यालिलियो जन्मिनुभन्दा झन्डै दुईदशकअघि सन् १५४५ मा ‘अरस्तुको भौतिक शास्त्र’ शीर्षकको एउटा पुस्तक प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त पुस्तकका लेखक ‘डोमिंगो डे सोटो’ थिए । सोटोले उक्त पुस्तकमा कुनै परिमाणको बल लगानी भएका बेला बस्तुमा देखिने चालका बारेमा अरस्तुले दिएको धारणाबारे उल्लेख गरेका थिए ।
‘अरस्तुको भौतिक शास्त्र’ प्रकाशन भएको दुई दशकपछि ग्यालिलियोको जन्म भएको थियो । आफू २० वर्षको हुँदा ग्यालिलियोले वस्तुलाई छड्के सतहमा गुडाएर ऐतिहासिक परीक्षण गरेका थिए । उनले गरेको उक्त परीक्षणलाई भौतिक शास्त्रीहरुले विशेष महत्त्वका साथ लिने गर्दछन् । परीक्षणपछि ग्यालिलियोले दिएको सूत्रलाई यान्त्रिकीको एउटा शाखा किनेम्याटिकस अन्तर्गत राखी अध्ययनअध्यापन गराइन्छ ।
ग्यालिलियोको सूत्रअनुसार – प्रवेग र वर्गसमयको गुणनफलको आधामात्रा विस्थापनको जम्मा मात्रासँग बराबर हुन्छ । पिन्डको सन्दर्भ नउठाइए पनि उनको यस मान्यतामा विस्थापनलाई बलसापेक्ष विषय मानिएको छ । ग्यालिलियोले २० वर्षको कलिलो उमेरमा मूलतः गुरुत्त्वप्रवेगबारे जानकारी गराएका थिए र त्यसकै आधारमा विस्थापनको सूत्र बनाएका थिए ।
कुँवरले भने – उक्त सूत्रको प्रयास पूर्ण नभएका कारण उक्त सूत्रले दिने विस्थापनको नतिजा वास्तविक विस्थापनभन्दा धेरै नै कम हुन पुग्दछ । भौतिक शास्त्रका लागि ग्यालिलियोले दिएको यो महान् योगदानलाई न्युटन, ह्यामिल्टन, इउलर र आइन्सटाइनले पनि गम्भीरताका साथ अध्ययन र प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो नगरेका कारण भौतिक शास्त्रको जगमा डरलाग्दो समस्या निम्तिन पुग्यो ।
भौतिक विज्ञान स्वतन्त्र विषय नहुँदै पुस्तकहरु प्रकाशन गरेका वैज्ञानिकहरुले ग्यालिलियोको योगदानको गहन अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा कुँवरको छ । भौतिक शास्त्रको इतिहासको समीक्षा गर्दै कुँवरले भने – उनीहरुले उक्त सूत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न, विकास गर्न र प्रयोगयोग्य गराउनतिर धैर्यतापूर्वक समय दिएको देखिएन । समयमै ग्यालिलियोको योगदानको मूल्यांकन र यथोचित सदुपयोग नहुँदा विज्ञानप्रेमि र अध्ययताहरु झन्डै ४ शताब्दीदेखि सही जानकारीबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । यसले हजारौँ अनुसन्धानहरुलाई प्रभावित गरेको छ ।
के छुटेको थियो ?
खोजकर्ता कुँवरले अनुसन्धानपत्रमा विस्थापनको सूत्रमा भएका अपूर्णता र छुटेका विषयहरुबारे गणितीय उदाहरणसहित स्पष्ट गरेका छन् । उनको ‘सुवातदेखि सुव्रतसम्म’ शीर्षकको अनुसन्धानपत्रमा एउटा रोचक उदाहरण दिइएको छ – पृथ्वीबाट कुनै यान सरदरमा एकनास दुरी परिवर्तनको दर ९.८ मिटर प्रतिसेकेन्ड हुने गरी अन्तरिक्षतिर गइरहेको छ र उक्त यानले मानौँ १ वर्षसम्म एकनास यात्रा गर्यो भने १ वर्षमा हुन जाने जम्मा विस्थापन कति हुन्छ ?
यस सवालमा वास्तविक विस्थापनको मात्रा ४,८७,३१,४४,७०,४९,२६,४०० मिटर हुनेछ तर ग्यालिलियोको अपूर्ण प्रयासमा आधारित सूत्रको आधारमा विस्थापनको मात्रा ४,८७,३१,४४,५५,०४,००,००० मिटर हुन जान्छ । यो नतिजा भनेको यानले पार गरेको वास्तविक दुरीभन्दा पन्ध्र करोड पैचालीस लाख छब्बीस हजार चार सय मिटरले कम हो । कुँवरले उक्त अनुसन्धानपत्रमा वास्तविक विस्थापनभन्दा पन्ध्र अर्व छ्याहत्तर करोड असी लाख मिटरले फरक हुने अर्को उदाहरण पनि दिएका छन् ।
मिलिमिटरभन्दा साना खन्डहरुको पनि एक्युरेसी खोज्ने नयाँ पुस्ताले अर्बौँ मिटर फरक हुने नतिजाहरु पनि थाहै नपाइकन एक्युरेट छ भन्दै पढ्नेपढाउने गर्दै आएको छ यो विडम्बना हो, यसले कसैलाई पनि हित गर्दैन – कुँवरले गणितीय प्रमाणसहित स्पष्ट गरे । कुँवरले थपे – सत्रौँ शताब्दी र त्यसपछिका वैज्ञानिकहरुले सर्वप्रथम यस्ता जाँचहरु गरेर मात्र भौतिक विज्ञानलाई अघि बढाउनुपर्ने थियो ।
परीक्षणहरु कहाँ र कहिले गरिएको थियो ?
पछिल्लो अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गर्नुभन्दा केही वर्षपूर्व खोजकर्ता कुँवरले सम्बन्धित विषयलाई काठमाडौँ रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्स्को प्रयोगशालामा पटकपटक दोहोराएर परीक्षण सम्पन्न गरेका थिए । आन्तरिक परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछिमात्र बाह्य परीक्षणका शृङ्खलाहरु थालिएको थियो । काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुमा सम्बन्धित परीक्षण तथा प्रवचनहरु सम्पन्न गरिएको थियो ।
कुँवरले काठमाडौँ रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्स्, गोंगबुमा वि.सं. ०६९, मंसिरदेखि पुसका बीचमा पछिल्लो आखिरी आन्तरिक परीक्षण सम्पन्न गरेका थिए । यस परीक्षणपूर्व वि.सं. २०६७ सालको चैत्रमा सम्बन्धित प्रवचन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दिइएको थियो ।, भौतिक शास्त्र पुनर्निर्माण अभियानका सदस्यहरु तथा अन्य सहयोगीहरुको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
वि. सं. ०६९ को पुुसमा युनाइटेड स्कलर्स एकेडेमी काठमाडौँमा पहिलोचोटि बाह्य रुपमा परीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । ठाडो सतहका लागि गरिएको उक्त परीक्षणले ७ घन्टाको समय लिएको थियो । परीक्षण कार्यक्रममा विभिन्न भौतिक शास्त्री, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको बाक्लो सहभागितामा रहेको थियो ।
वि.संं. ०६९ को माघमा दिव्यकान्ति बोर्डिङ् स्कुलको चौरमा समतल सतहका लागि पूर्वपरीक्षण सम्पन्न भएपछि अरनिको इन्टरनेशनल एकेडेमी ललितपुरमा सम्बन्धित परीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । समतल सतहका सन्दर्भमा गरिएको उक्त परीक्षणले ५ घन्टाको समय लिएको थियो । भौतिक शास्त्र पुनर्निर्माण अभियानको सहयोगमा परीक्षण सम्पन्न भएको थियो ।
पछिल्लो चोटिको परीक्षण कुँवरले वि.सं. २०७३ को माघमा गरेका थिए । काठमाडौँ रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्स्को चितवन शाखामा उक्त परीक्षण गरिएको थियो । ठाडो सतहका सन्दर्भमा गरिएको उक्त परीक्षणले झन्डै २ हप्तासम्मको समय लिएको थियो ।
परीक्षणपछि कुँवरले दिएको समाधान के हो ?
भौतिक शास्त्रमा ‘सुवात’का ५ वटा सूत्रहरुको पठनपाठन विश्वभरि हुन्छ । अंग्रेजी वर्णहरु एस, यू, भी, ए र टीबाट ‘सुवात’ शब्द बनेको हो । यी वर्णहरुको अर्थ क्रमशः विस्थापन, शुरुको गति, अन्तिम गति, प्रवेग र समय भन्ने हुन्छ । स्कुल र कलेजका पाठ्यपुस्तकहरुमा ‘सुवात’का पाँचवटा समीकरणहरु रहेका छन् ।
‘सुवात’का पाँचवटै समीकरणले वास्तविकताभन्दा फरक परिणाम दिएको थाह पाएपछि कुँवरले ‘सुव्रत’का ५ वटा नयाँ समीकरणहरु आविष्कार गरेका थिए । अंग्रेजी एस, यू, भी, आर र टीको समग्रताबाट ‘सुव्रत’ शब्द बनेको हो । उनले आविष्कार गरेका पाँचवटै समीकरणहरु ‘सुवात’का पाँचवटै समीकरणभन्दा फरक, सही र सरल छन् । यी पाँचवटै समीकरणहरुले विस्थापन र अन्य परिमाणहरुको मात्रा जति हुनुपर्ने हो ठ्याक्कै त्यति दिन्छन् ।
पत्ता लागेका नयाँ समीकरणहरु सामान्य क्याल्कुलेटरको सहाराले सबैले सधैँभरि जाँच्न सकिने कुँवरले बताए । क्याल्कुलेटरै नभए पनि सजिलै जाँच्न सकिन्छ – खोजकर्ता कुँवरले थपे ।
विस्थापन निकाल्दा आरम्भिक गति र समयको गुणनफलमा प्रवेग र समयको गुणनफलको आधा मात्रा जोडेर कामचलाउ मान निकाल्ने गरिएको थियो । तर कुँवरले आरम्भिक गति र समयको गुणनफल निकाली सदिश दुरीका पदसंख्या, दुरी परिवर्तनको दर र समयको गुणनफलको आधा मात्रा जोडेमा वास्तविक विस्थापन आउने तथ्य पत्ता लगाएका हुन् ।
वस्तुमा निरन्तर एकनास बल लगानी भएका बेला फरकफरक समयान्तरालमा पार हुने १ मिटरदेखि ४ मिटरसम्मका सदिश दुरीहरुको जम्मा योग १० मिटर हुन्छ तर विश्वभरिको भौतिक विज्ञानमा ८ मिटर हुन्छ भनी पढ्नेपढाउने गरिन्छ – कुँवरले अर्को गणितीय उदाहरण पनि दिएर स्पष्ट पारे ।
विस्थापनको सूत्रको प्रयास थालिएको ४३२ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक शास्त्रमा यात्राको मात्रा १० मिटर हुँदा ८ मिटर भएको लेखिन्छ । १० मिटर यात्रा भएको हिसाब निकाल्ने कुनै सूत्र बन्न सकेन – कुँवरले बताए । अझै पनि १० लाई ८ भन्दै जाने हो भने त्रुटिपूर्ण र कामचलाउ अध्ययनअध्यापनको इतिहास अझ लम्बिनेछ । मानवजातिले गर्न सक्ने आविष्कार र खोजका सम्भावनाहरु थप कटौती हुनेछन् – अनुसन्धानकर्ता कुँवरले चिन्ता व्यक्त गरे ।
अनुसन्धानपत्रमा कुँवरले प्रस्तुत गरेका गणितीय प्रमाणहरुमध्ये एउटा उदाहरणमा हुनुपर्ने विस्थापनभन्दा पन्ध्र अर्व छ्याहत्तर करोड असी लाख मिटर कम हुने उदाहरण पनि समेटिएको छ । यसतर्फ संकेत गर्दै उनले भने – भौतिक विज्ञानले यति ठूलो अन्तरसमेत बेवास्ता गर्नु दुखद पक्ष हो । भौतिक शास्त्रको विश्वसनीयता ठूलो संकटमा छ ।
भौतिक विज्ञानजस्तो सत्यको बढी नजिक मानिने विज्ञानले मानवपुस्तालाई कस्तो मार्गदर्शन गरेको छ ? सबैले विचार गर्नुपर्ने भएको छ – कुँवरले बुद्धिजीवी र सन्चारकर्मीहरुले मानवजातिको हितका लागि आआफ्ना स्थानबाट समयमै यथोचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
यो समस्यामा कुँवरको ध्यान किन गयो ?
०५५ सालदेखि एउटा यन्त्र बनाउने योजना बनाइरहँदा त्यसका लागि आवश्यक शक्ति मापन गर्न विस्थापनको प्रचलित सूत्रले काम नगरेपछि उनी हैरान थिए । त्यसपछि ०६० तिर बागलुङ्को ग्यालेक्सी इन्जिनियरिङ वर्कसपमा दिउँसो पढाउने र साँझमा यन्त्र बनाउने गर्न थाले । त्यतिबेला कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको थिएन ।
कुँवरको ०६७ मा प्रकाशित एउटा पुस्तकमा भौतिक शास्त्रमा वर्गसमयको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको उल्लेख छ । जम्माजम्मी ७१८ पृष्ठको उक्त पुस्तकका केही खन्डहरुमा उनले एकाइ समयमा देखिने दुरी परिवर्तन दरको प्रयोगबारे पनि उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा केही प्रवचन कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न भएका थिए । पछि उनले त्यसकै आधारमा दुर्यान्तर पत्ता लगाएका थिए ।
भौतिक शास्त्रका सयौँ सूत्रहरुमा समस्या भएको थाह पाएपछि त्यसको वास्तविक कारण पहिल्याउनु उनका लागि चुनौती हुन गएको थियो । कारण पहिलिएपछि समाधान पहिल्याउन फेरि चुनौती थपिन पुगेको थियो । समयक्रमसँगै वास्तविक समाधान समेटिएका अनुसन्धानपत्रहरु पनि सम्पन्न गर्न उनी सफल भएका थिए ।
सरल र अकाट्य समाधानको निष्कर्षमा पुगी त्यसलाई परीक्षण गरेँ । तर जोकोहीले अध्ययन गर्न मिल्ने गरी अनुसन्धानपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने भयो । त्यसो नगरेसम्म के गरेको हो भन्ने कुरा सबैलाई थाह नहुने भयो । त्यसैले थप जानकारी मिलोस् भन्ने अभिप्रायःले ‘सुवातदेखि सुव्रतसम्म’ र ‘सुव्रतका कही प्रभावहरु’ शीर्षकका दुई वटा अनुसन्धानपत्रहरु प्रकाशित गरेँ – कुँवरले बताए ।
खोजकर्ता कुँवर भन्छन् – कुनै तथ्य परीक्षणबाट सिद्ध भइसकेपछि यस विषयबारे सबैलाई जानकारी गराउनतिर नलागी व्यक्तिगत र पारिवारिक सुखमा समय दिनतिर मन लागेन, कसैले पनि यसो गर्नु हुँदैन । त्यसो गरियो भने सम्पूर्ण मानवजाति र मानवपुस्ताका लागि गरिएको अक्षम्य अपराध हुन जान्छ – कुँवरले भने ।
महान् वैज्ञानिक आर्किमिडिजको प्रसंग उल्लेख गर्दै कुँवरले भने – आर्किमिडिजको व्यवहारले हामीलाई सत्य भेटियो भने अरुलाई बताउन नबिर्स, बरु कपडा लगाउन बिर्से पनि केही हुँदैन भन्ने सिकाएको छ । आर्किमिडिजले नयाँ करा पत्ता लगाएपछि अरुलाई त्यसबारे बताउनका लागि कपडा नलगाई नाङ्गै दौडिएका थिए ।
बुझ्नका लागि थप उदाहरण
मानौँ स्थिर अवस्थामा रहेको एउटा मोटरसाइकल हरेक सेकेन्डमा अघिल्लो समयान्तरालका तुलनामा थप एक मिटर बढी यात्रा गर्दै अघि बढेको छ । तब मोटरसाइकलले ५ सकेन्डसम्म कति मिटर यात्रा गरिसकेको हुनेछ ?
यहाँ, मोटरसाइकलले निम्नबमोजिमको यात्रा गर्नेछ ।
पहिलो सेकेन्डमा १ मिटर
दोस्रो सेकेन्डमा २ मिटर
तेस्रो सकेन्डमा ३ मिटर
चौँथो सेकेन्डमा ४ मिटर
पाचौँ सेकेन्डमा ५ मिटर
यस समस्याको समाधान निकाल्नका लागि हरेक सेकेन्डमा दुरीको मात्रा १ मिटर थपिँदै गएकाले भौतिक विज्ञानमा प्रवेग १ मिटर प्रतिसेकेन्डप्रतिसेकेन्ड हुने मानिन्छ । नयाँ अनुसन्धानपत्रमा यसलाई दुरी परिवर्तनको दर १ मिटर प्रतिसेकेन्ड मानिएको छन् । लागेको जम्मा समय भने दुवै सूत्रका लागि ५ सेकेन्ड छ ।
अब भौतिक विज्ञानको प्रचलित सूत्रअनुसार विस्थापन भनेको प्रवेग र समयको वर्गफलको आधा मात्रा हो । यसबारेमा यकिन गर्न चाहेमा भौतिक शास्त्रका पाठ्यपुस्तकमा भएका सम्बन्धित गणितीय समाधानहरु हेर्न सकिन्छ । यसअनुसार नतिजा निकाल्दा २५÷२ मिटर हुन जान्छ । यो भनेको १२.५ मिटर हो । यो परिणाम वास्तविकताभन्दा २.५ मिटरले कम हो । किनकि पार भएको दुरी १५ मिटर हुनुपर्ने थियो । संसारभरि पठनपाठन गराउँदा यही सूत्र र यस्तै परिणाम पूर्ण र सही भएको मानिन्छ ।
तर नयाँ अनुसन्धानपत्रमा भने यस समस्याको समाधानका लागि सुरुको विस्थापनसमेत गरी विस्थापन संख्या ६ हुने भएकाले त्यस संख्यालाई दुरी परिवर्तन दर १ मिटरप्रतिसेकेन्ड र लागेको समय ५ सेकेन्डले गुणन गरी आधा गर्दा सही परिणाम आउने उल्लेख छ । यसरी समाधान निकाल्दा विस्थापन ३०÷२ मिटर हुन्छ । यो भनेको १५ मिटर हो । यो सूत्रले दिने समाधान भने ठ्याक्कै मिल्छ ।
(नोटः यही क्रम १० सेकेन्डसम्म जारी राख्ने हो भने अझ ठूलो अन्तर आउनेछ । माथि दिइएको उदाहरण सेकेन्डमा दिइएको छ । मिनेट मानेर हेर्दा पनि यस्तै फरक नतिजा आउँछ ।)
Previous articleम्याग्दीमा १ हजारले भरे म्यादी प्रहरी भर्नाको फाराम
Next articleकिन निशानामा पर्दैछ पश्चिम म्याग्दी यातायात ?